Ny 5 taona farany tamin'ny sasany distros lehibe | Avy amin'ny Linux
Ny 5 taona farany an'ny distros lehibe sasany
Na dia somary mifantina aza ny lohateny, ny sakaizantsika Juan Carlos Ortiz dia nihevitra ireto distros manaraka ireto ho toy ireo ao anatin'ireny 5 taona lasa izay efa nanana mitarika andraikitra ao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, tsy noho ny lazany fotsiny, fa noho izy ireo (na) mavesatra mavesatra izay nanova tsikelikely ny tontolon'ny penguin.
Ny filaharan'ny distros dia kisendrasendra fotsiny, tsy natao ho filaharana toerana izany, mainka fa ny fametrahana rafitra iray ambonin'ny rafitra hafa.
Misy distros tena lehibe izay tsy nampidirina noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia tavela tamin'ity famerenana ity: Arch Linux, Debian, Slackware, Sabayon, PCLinuxOS, Gentoo, ankoatry ny hafa. Angamba any aoriana isika dia hampiditra azy ireo ao amin'ny ampahany faharoa amin'ity lahatsoratra ity.
2007: Navoaka i Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, ny voalohany miaraka amin'ny fanohanan'ny fiteny aziatika zanatany, ary 7.10 Gutsy Gibbon. Nahazo ny loka InfoWorld Bossie ho an'ny OS Open Source Client tsara indrindra i Ubuntu; mitombo ny lazany eo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux ary manomboka miavaka amin'ny tontolo mitombo haingana indrindra.
2008: Navoaka ny Ubuntu 8.04 Hardy Heron (LTS) sy ny 8.10 Intrepid Ibex. Ny PCWorld dia manome isa an'i Ubuntu ho "ny fizarana Linux tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao"
2009: Famoahana ny Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalop izay manampy ext4 ho toy ny rafitry ny rakitra hametrahana sy hanohanana ireo mpikirakira ARM, ary 9.10 Karmic Koala, izay nanombohana ny Ubuntu Software Center, izay mamela ny fonosana rehetra ho tantanana afovoany kokoa. Ireo kinova ireo dia hampitombo ny isan'ny mpampiasa Ubuntu, hampanakaiky kokoa ny toeran'ny fizarana malaza indrindra ary hanana mpampiasa mavitrika 13 tapitrisa manana taham-pisondrotana avo kokoa noho ny fizarana hafa. Google dia nanambara fa mpiasa maherin'ny 20.000 70 mampiasa kinova Ubuntu somary novaina amin'ny asany isan'andro. Ny Zandarimariam-pirenena any Italia dia mitahiry ny 5000% amin'ny tetibola IT amin'ny alàlan'ny famindrana ireo toeram-piasana 180.000 ho any Ubuntu; Tany Makedonia, ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny siansa dia nanolotra solosaina maherin'ny XNUMX miaraka amin'i Ubuntu any an-tsekoly.
2010: Navoaka ny Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LTS), izay nitady ny hampihenana ny fotoana fanombohana, ny famolavolana ny Center Software, ary ny fanatsarana ny fitoniana eo amin'ny rafitra amin'ny ankapobeny. Ho fanampin'izany, nohatsaraina be ny installer, nanampy slide. Ny famoahana ny kinova 10.10 Maveric Meerkat dia nanampy btrfs ho an'ny filesystems ary nametraka olana vitsivitsy momba ny fampiasa sy hadisoana an'ny Unity, saingy mbola mila fotoana lava vao zatra ny fiarahamonina amin'ny fampiasana azy. Ny biraon'ny birao avy ao amin'ny OpenOffice dia novaina ho LibreOffice.
2011: Navoaka i Ubuntu 11.04 Natty Narwhal sy 11.10 Oneiric Ocelote. Ny firaisankina dia nampiana ho tontolo iainana GUI misy toerana mahasolo, manolo ny GNOME, izay miteraka fivoahan'ny mpampiasa. Ny fampidirana ireo rindranasa natsangana tao Qt sy ny fampifangaroana ny fikirakirana ny Qt sy GTK dia nambara. Nesorina ny kinova maromaro, ny anarana hoe 'Ubuntu' fotsiny no ampiasaina amin'ny karazana solosaina rehetra, ary ny 'Ubuntu Server' ampiasaina amin'ny mpizara. Ny fampidirana Ubuntu amin'ny karazana takelaka, fahitalavitra, telefaona ary fitaovana hafa dia nambara ho an'ny kinova 14.04 (aprily 2014). Ny isan'ny mpampiasa araka ny Cannonical dia manodidina ny 20 tapitrisa. Na izany aza, mbola very toerana voalohany amin'ny laharana Distrowatch amin'ny Linux Mint i Ubuntu nandritra ny taona maro. Ny Ubuntu Server dia miakatra amin'ny toerana fahefatra amin'ireo fizarana Linux be mpampiasa indrindra ho an'ny mpizara.
2012: Navoaka i Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (LTS). Ubuntu TV dia aseho ao amin'ny CES, mamela ny fitantanana atiny sy serivisy amin'ny fahitalavitra. Nanambara 'Ubuntu for Android' izay ahafahanao mihazakazaka ny birao Ubuntu amin'ny smartphone Android rehetra. Fifanoherana momba ny rafitra UEFI napetrak'i Microsoft ho an'ny Windows 8, nanapa-kevitra i Cannonical fa hamorona ny lakileny manokana ho solony, izay mendrika ny tsy fankasitrahan'ny FSF. Ny fivoaran'ny Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal dia manomboka amin'ny fisian'ny kinova Alpha voalohany.
fanadihadiana: Tsy misy isalasalana fa i Ubuntu no referansa farany ambony amin'ny fitomboan'ny tontolon'ny GNU / Linux. Raha tsy misy fialonana an'i Windows, ny ankamaroan'ny fifindra-monina mpampiasa Redmond OS taloha dia nandalo ny distro Cannonical tsy misy mpanelanelana ary ny fitomboany nandritra ny taona maro dia taratry ny zava-misy koa fa maro ny mpampiasa no ampirisihina hahafantatra fa Linux koa dia tontolo afaka mamaly ny filanao.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nihatsara i Ubuntu, nanampy ny fanohanan'ny fitaovana, namorona fitaovana manamora ny fitantanana, poloney ny sary, manitatra ny tsenany amin'ireo sehatra hafa, mamorona vondron'olona matanjaka sy lehibe. Angamba ny tsy fahombiazany lehibe dia tonga tamin'ny fampiharana ny Unity, tontolo iray izay nahagaga ny maro tamina bibikely maro tany am-piandohana ary nahatonga ny "fifindra-monina" ho an'ny safidy hafa. Ny mpampiasa hafa dia nanjary tia ny Unity na nanova ny tontolo iainana sary.
Inona no antenaina amin'ny ho avy? Ny fanitarana ny tsena hafa kasain'ny Cannonical hizarana azy dia mety hanodina ny fifandanjana hahatonga an'i Ubuntu ho tianao indrindra, na dia efa manana mpampiasa be dia be aza izy ankehitriny. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fanombanana ny vokadratsin'ny fanapahan-kevitra tsirairay sy ny fanohanan'ny vondrom-piarahamoninao.
2007: Famoahana ny kinova 2.2 "Bianca", 3.0 "Cassandra", 3.1 "Celena" ary 4.0 "Daryna", izay ity farany izay nanampy ho an'ny voalohany ho an'ny KDE ho solon'ny GNOME miaraka amin'ireo fonosana rehetra ao aminy, ary koa ireo fitaovana lehibe ilaina toy ny mintUpdate sy mintDesktop ary mamaritra ny birao izay ho fari-piainan'ny Mint manomboka izao, miloka amin'ny fampiasana ny mpampiasa. Cassandra dia manampy ny vokatra "goba" malaza hivezivezy eo anelanelan'ny birao.
2008: Fandefasana ny kinova 5 "Elyssa" sy 6 "Felicia". Ny hafainganan'ny fampandrosoana dia novaina ho famoahana roa isan-taona, toy ny Ubuntu, ny fizarana Linux Mint fototra. Elyssa no voalohany nanampy fiteny maro, fanohanana ny maritrano x86_64 ary, amin'ny maha LTS azy, io no ho andiany be mpampiasa indrindra eo amin'ny fiaraha-monina mandritra ny taona maro.
2009: Fandefasana ny kinova 7 «Gloria» sy 8 «Helena». Gloria dia manolotra ny fanohanana ext4 sy ny fanovana zava-kanto manan-danja, izay hanampy betsaka amin'ny manavaka azy amin'ny Ubuntu ary manolotra distro mora kokoa ho an'ny mpampiasa. Helena dia manolotra fanatsarana miavaka amin'ny GDM mintUpdate, mintInstall, mintUpload, mintBachup ary ny Software Manager, fitaovana miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana no tanjany isaky ny fandefasana. Grub2 sy OEM dia ampiana koa
2010: Fandefasana ny kinova 9 "Isadora" LTS ary 10 "Julia". Navoaka ny LMDE 201012, Linux Mint miorina 100% mifototra amin'ny famoahana Debian mifanaraka amin'ny Debian fa tsy miaraka amin'ny fanontana Mint lehibe. Ny isan'ny mpampiasa amin'ny fizarana hafa dia mitombo amin'ny ambaratonga lehibe, manomboka mahazo laza i Mint. Ny fanombohana ny kinova miaraka amin'ny solosaim-birao hafa mankany amin'ny GNOME, toa ny KDE, XFCE na Fluxbox, dia nambara tamin'ny fomba ofisialy (na dia talohan'ny nisian'ny dikanteny "fiarahamonina" amin'ireo tontolo iainana ireo aza)
2011: Famoahana ny kinova 11 "Katya", izay tandindomin-doza noho ny famotsorana ny GNOME 3; tapaka fa hanohy hampiasa ny GNOME 2 fa asaina mitady vahaolana hafa ahafahana mitahiry ny mampiavaka azy. OpenOffice dia nosoloina LibreOffice. Tamin'ny farany Katya dia nivadika ho iray amin'ireo fizarana nahomby indrindra teo amin'ny tantaran'ny Mint, fahombiazana izay tsy azon'ny mpandimby azy nisesy. Version 5 Elyssa dia tonga tamin'ny faran'ny fiainany amin'ny maha LTS azy. Tamin'ny faran'ny taona 12 "Lisa" dia navotsotra, izay manampy ny MATE ho tontolo iainana misolo ny GNOME 3. Fandefasana ny LMDE 201104 sy 201109. Ny ekipa mpamorona Linux Mint dia mandefa amin'ny fomba ofisialy an'i Cinnamon, fork an'ny GNOME 2 izay mety ho misy amin'ny fizarana hafa toa ny Fedora, Ubuntu, OpenSUSE na CentOS ankoatry ny hafa. Linux Mint dia manolo an'i Ubuntu ao amin'ny laharam-pizarana pejy manokana an'ny Distrowatch, manaporofo ny fitomboan'ny lazan'ny Mint; sambany tao anatin'ny taona maro no nahavery ny toerana voalohany ny Ubuntu
2012: Fandefasana ny kinova 13 "Maya" sy LMDE 201204. Miara-miasa amin'ny CompuLab, MintBox dia natomboka, solosaina kely mitovy habe amin'ny modem ary misy Linux Mint ho rafitra miasa. Maya dia ahitana MDM, manolo ny GDM ho mpitantana fidirana; Iray volana taorian'ny nanombohany dia nofaritan'ny fikambanana isan-karazany ho "iray amin'ireo fizarana voalamina tsara sy miasa ao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux." Ny fampandrosoana ny kinova 14 dia kasaina, tsy misy kaody anarana amin'izao fotoana izao ary miorina amin'ny famoahana Ubuntu 12.10 manaraka
fanadihadiana: Ny Linux Mint dia maneho ohatra iray tsara amin'ny fomba ahafahan'ny distro miala amin'ny maha-iray amin'ireo "antontam-bato" ka hatrany an-tampon'ny fizarana malaza indrindra, nefa tsy hadinoko fa pejy voalohany fotsiny ny Mint! Tena 5 taona nahitam-bokatra tokoa ho an'ny distro izay somary tanora ihany, ny famoahana azy voalohany dia Ada, kinova 1.0 tamin'ny 2006. Raha ny sasany kosa milaza fa ny satan'ny Mint ankehitriny dia noho ny fifindra-monina mpampiasa avy amin'ny Ubuntu vokatry ny ny fandavana an'i Unty, tsy marina tanteraka izany, satria mety hampihena an'i Mint izany.
Ny mpampiasa dia nanasongadina ny Mint nandritra ny taona vitsivitsy noho ny fampidirana ireo codec multimedia sy java, ny LiveCD tsy misy fangarony, ny isan'ireo fitaovany manokana ary koa ny tontolo misy sary izay nifantoka hatrany amin'ny fanamorana ny fampiasana. Tany am-piandohana dia nampiasa GNOME aho, ary rehefa navoaka ny kinova faha-3 amin'ity tontolo ity dia tapaka fa hitazona ny Kanelina sy ny MATE, fork roa izay mamela hitahiry amin'ny fomba iray ny votoatin'ny GNOME ao amin'ny kinova faha-2. Ireo fanapahan-kevitra rehetra ireo dia nahomby indrindra satria ny mpandraharaha dia mahazo antoka fa manana fifandraisana tsara amin'ireo mpampiasa azy ireo izy ireo, izay miampy hatrany.
Mandrosoa, Mint dia tokony hanaraka ny fitsipika ifotony: ataovy tsotra sy matanjaka ny distro ary ho faly ny mpampiasa azy. Izany no mendrika ny toerana misy azy ankehitriny, ary na dia tsy manana tahan'ny fitomboana haingana toa an'i Ubuntu aza izy, ny fampandrosoana ny fizarana azy dia tsy misy fialonana amin'ny rafitra Cannonical.
2007: Version 5 Navoaka. Jim Whitehurst Nomena anarana hoe Red Hat filoha sy CEO; Matthew Szulik dia manohy ny maha filohan'ny Red Hat. Nandritra ny taona fahefatra nisesy, Red Hat dia nomena anarana hoe Vendor Software Matoky indrindra. Navoaka ny RHEL 5.1
2008: RHEL 5 dia mahazo volamena toy ny vokatry ny taona avy amin'ny SearchEnterpriseLinux.com ao amin'ny sokajy Linux Server Distributions noho ny fitarihany amin'ny virtualization. Red Hat dia tafiditra ao amin'ny lisitry Forbes amin'ireo orinasam-teknolojia 25 mitombo haingana indrindra. Channel Insider Names Red Hat Enterprise Linux Product of the Year 2008. RHEL 5.2 Famoahana
2009: Navoaka i RHEL 5.3. Navoaka ny RHEL 5.4, mampiditra ny teknolojia virtoaly miorina amin'ny kernel (KVM) teknolojia virtualization miaraka amin'ny teknolojia virtualization Xen voalohany. Sambany i RHEL sy i Windows dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny virtualization, toy ny mpampiantrano na amin'ny maha vahiny anao, miaraka amin'ny fanohanan'ny orinasa roa tonta.
2010: Famoahana ny kinova 6, izay manampy amin'ny fieritreretana ny ho avy iray izay ivon-toerana ao anaty rahona ny serivisy. Ny fitaovana Red Hat Cloud Access dia ahafahan'ny mpampiasa manitatra ny famandrihana RHEL azy amin'ny Cloud amin'ny fomba tsotra sy mora foana.
2011: Fandefasana ny kinova 6.1 sy 6.2, fanatontosana ny firaketana virtualization sy ny fifanarahana amin'ireo vokatra SAP ara-barotra. Nahatratra 2.5 tapitrisa ny fisoratana anarana RHEL
2012: Nanambara i Red Hat fa ny fanohanana ny RHEL 5 sy 6 dia hitarina hatramin'ny 7 taona ka hatramin'ny 10. Ny adihevitra momba ny rafitra UEFI napetrak'i Microsoft ho an'ny Windows 8, Red Hat ary Cannonical dia mandray fanapahan-kevitra samy hafa.
fanadihadiana: Mahagaga fotsiny ny toerana misy an'i Red Hat eo amin'ny tsenan'ny computing, saingy lavitra ny fiavonavonana sy ampihimamba toa an'i Microsoft, Red Hat dia mahazo izany mari-pahaizana izany amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny vokatra avoakany sy ny fanampiana omeny ny mpanjifany. Tsy azontsika an-tsaina akory ny mari-pankasitrahana sy rakitsoratra rehetra ananan'ity orinasa ity, ary na dia ny isan'ny mpanjifa ananany aza (ampy ny miantso ny NASA sy ny IBM dia ampy ho antsika) Ireo izay tsy mampiasa RHEL dia mety hanana hevitra maharitra Ny zava-drehetra asehony, saingy lavitra ny fisalasalana fa fizarana kalitao goavambe izay misy ny fanohanany manokana, ny fampidirina amin'ireo vokatra fampiasa hafa ary ny rafitra iray faran'izay tsara eto amin'ny tontolon'ny Linux.
Angamba ny fitomboan'ny RHEL lehibe indrindra hitantsika eo amin'ny sehatry ny asa, satria io faritra io no ilana filaminana sy hamafisana. Ny indostrian'ny birao dia mety tsy hitombo amin'ny ambangovangony, fa i Red Hat dia hanohy hanome ny RHEL ny fampandrosoana hatrany.
2007: Miaraka amin'ny famoahana ny Fedora 7 "Moonshine", natambatra ho an'ny fitaovana vaovao hitantanana ny fonosany ny fonosana Core sy Extras. Navoaka tamin'ny Novambra ny andiany 8 "Werewolf", izay ampiana fiasa vaovao toy ny fampidirana ny Iced Tea, Codec Buddy ary Pulse Audio; Ny Fedora no lasa fizarana voalohany ahafahan'ny Pulse Audio ajanona amin'ny alàlan'ny default.
2008: Fedora 9 "Sulfur" dia manolotra fanatsarana lehibe sy fanatsarana ny fiaraha-monina. Ny Fedora 10 «Cambridge» dia mitondra ny mampiavaka azy indrindra amin'ny bootloader Plymouth, manolo ny RHGB (Red Hat Graphical Boot)
2009: Version 11 "Leonidas" dia mitondra fanatsarana lehibe amin'ny fanombohana sy ny fanidiana ny rafitra (20 segondra miakatra amin'ny fidiran'ny mpampiasa), ny fanamafisana ny fanamafisana ny dian-tànana, ny fanatsarana ny yum ary ny packagekit, ary ny fanohanana ireo rafi-drakitra ext4. Ny Fedora 12 "Constantine" dia manampy fanavaozana lehibe amin'ny grub izay mamela ny partition ext4 ho ekena, na dia efa nampidirina teo aza io fanohanana io, ny grub dia namorona partition ext2 / ext3 kely rehefa nametraka ny rafitra. Fanampiana feno ho an'ny fiteny aziatika koa nanampy.
2010: Fedora 13 "Goddard" dia mampiditra fanavaozana RPM izay manatsara ny fitantanana fonosana hatramin'ny 30%, fanatsarana 3D ho an'ny karatra Nvidia. Ny kinova 14 "Laughlin" dia navoaka voalohany tao amin'ny rahona Amazon EC2, endri-javatra izay notohizan'ny kinova ankehitriny, ahitana ny fanavaozana ireo fonosam-pampandrosoana maro sy tranombokin'ny rafitra.
2011: Ny famoahana ny Fedora 15 "Lovelock" dia ahitana ny fanatsarana betsaka indrindra tao anatin'ny taona maro, nahazoany fitomboana betsaka amin'ny isan'ny mpampiasa sy naoty media tsara indrindra. Tafiditra ao amin'ny Free Office ny fanoloana ny Open Office, ny fitaovana virtualization, ny fanavaozana ny tontolon'ny sary ao anatin'izany ny XFCE sy ny LXDE, ny fanatsarana ny rafitry ny rakitra sy ny hafainganana. Ny Fedora 16 "Verne" dia nanampy fitaovana hiasana amin'ny rahona, ny fanavaozana ny grub 2 ary ny HAL dia nesorina, ny fanavaozana ireo fitaovana fampandrosoana ary ny fanavaozana ny kernel ho 3.1.0. Navoaka ny serivisy web antsoina hoe "Ask Fedora" izay vavahadin-tserasera hivadi-toerana amin'ny fanontaniana sy fisalasalana avy amin'ny fiarahamonina ary azon'ireo mpampiasa novaliana ihany.
2012: Ny kinova farany navoaka dia "Beefy Miracle" 17, miaraka amina endri-javatra toy ny kernel 3.4.1, GNOME 3.4, KDE 4.8, fanatsarana ny Network Managaer, mifanentana amin'ny efijery mikasika ary fanoloana iptable amin'ny firewalld. Ireo kinova izay mbola manana fanohanana dia 16 sy 17; Fedora 18 "Spherical Cow" dia antenaina havoaka amin'ny volana novambra amin'ity taona ity
fanadihadiana: Ny teny filamatr'i Fedora dia “Fahafahana. Fisakaizana. Endri-javatra ”, ary azo antoka fa mihaona amin'ireo toerana ireo. Miorina amin'ny kaody loharano nomen'i Red Hat, Fedora dia manome rafitra fiasa eo amin'ny fiarahamonina ahafahantsika mankafy ireo hatsaram-panahy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, mifandray amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika sy mahafinaritra, ary manana fitaovana maro hanamorana ny fampiasana ny solosaina.
Angamba ny fitomboan'ny Fedora dia tsy nipoaka haingana toy ny amin'ny fizarana hafa, fa ny fitomboany kosa tsy mijanona, manohy mihatsara isaky ny famoahana ary manohy mitazona, aorian'ny tantara nandritra ny 9 taona, toerana iray amin'ireo fizarana manan-danja indrindra amin'ny tontolon'ny GNU / Linux. Iray amin'ireo teboka tena kiana indrindra ataon'ireo mpampiasa fizarana hafa ny tsingerina fanohanana fohy izay omena ny kinova tsirairay sy ny fanovana sasany omena ny rafitra fisie eo anelanelan'ny famoahana iray sy ny iray hafa, na dia efa nitranga imbetsaka aza izany. fitantanana.
Ny hevitro dia teraka i Fedora hijanona: maha-tetik'asa eo amin'ny fiarahamonina ary manome fahafaha-misafidy eo amin'ny Spins, Formats ary Desktops maromaro dia azo antoka fa hitombo sy hitombo ny fitomboany. Rehefa mandeha ny taona dia hanohy hanana ny fahombiazana izay nohariny nandritra ny taona maro izy.
2007: Mandriva 2007 (izay navoaka tamin'ny faran'ny taona 2006) dia nanintona ireo onjam-peon'ireo mpampiasa vaovao, nampitombo ny lazany, ary misy ny fiasa vaovao toy ny endrika fizarana USB (Mandriva Flash) sy LiveCD. Ny Version 2007.1 no "Lohataona" voalohany, izay manova ny tsingerin'ny fampandrosoana ho 6 volana; Compiz sy Beryl, MandrivaUpdate, MandrivaOnline, ary DrakRPM no tafiditra ao. Mandriva 2008.0 dia manampy fitaovana fifindra-monina Windows / Linux vaovao: transfugedrake.
2008: Ny kinova 2008.1 dia manatsara izany fanampiana izany amin'ny fanampiana ny fifindra-monina Windows Vista. Ny famoahana 2009.0 dia manampy fanohanana bebe kokoa amin'ny hardware sy fampidirana lalina kokoa amin'ny KDE sy LXDE. Ity sy ny iray manaraka dia nofidian'ny fiarahamonina ny kinova ara-tantara tsara indrindra.
2009: Mandriva 2009.1 manampy fanampiana ext4 sy teknolojia Speedbot vaovao. Ny kinova 2010, antsoina hoe Adelie, dia feno fanatsarana sy fanovana: filaminana lehibe kokoa, fifandanjana miaraka amin'ny tontolon'ny sary bebe kokoa, nampiana ny kaonty vahiny, fampidirina bebe kokoa amin'ny kinova Linux Mobile, fanatsarana ny URPM ary urpmi.
2010: Ny famoahana ny kinova 2010.1 ("Farman") dia tsy mitondra fanatsarana lehibe, ny fanavaozana ny fonosana ihany. Tapaka ny tsingerin'ny fampandrosoana ary miverina afaka 1 taona, mijanona ny distro ary mamoaka fanavaozana ihany. Ny tsaho momba ny fivarotana an'i Mandriva dia mampidi-doza ny asan'ny mpiasan'izy ireo (monina any Brezila sy France ny ankamaroany) ary mitarika ny vondrom-piarahamonina anaty rahona tsy azo antoka; nilamina ny raharaha tamin'ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola vaovao. Misaraka ny mpampiasa sasany ary manomboka ny fampandrosoana an'i Mageia miaraka amin'ireo mpampiasa izay miahiahy ny amin'ny ho avin'ilay teo alohany.
2011: Ny RC voalohany an'ny kinova 2011.0 ("Hydrogen") dia mamerina manantena an'i Mandriva, ary ny kinova farany dia mitondra singa vaovao izay miavaka i MandrivaSync, serivisy handefasana data. Amin'ny faran'ny taona dia ao anatin'ny toe-karena matotra ny orinasa, ka mandrahona ny hisintona fanampiana ara-bola ny mpampiasa vola raha tsy misy ny vahaolana ary eo no eo ny fatiantoka na fivarotana any amin'ny mpandoa avo indrindra.
2012: Taorian'ny "ultimatum" marobe nataon'ny mpamatsy vola dia nahemotra ny fatiantoka; ny sasany amin'ireo mpanangana taloha dia manatevin-daharana ny fampandrosoana ny fork vaovao any Mandriva, ROSA Marathon 2012. Na eo aza ny fahazavana vaovao dia nametra-pialana ny mpiasa sasany noho ny fahafatesan'ny Edge-IT, sampana iray izay niasa tamin'ny maro tamin'ireo mpamorona. Nekena ny famerenana amin'ny laoniny an'i Mandriva, natsangana ny fototra ary ampitaina amin'ny fiarahamonina ny fampandrosoana. Ny "Tech Preview" an'ny kinova 2012 dia natomboka, antsoina hoe "Bernie Lomax". Ny fototra dia mandefa fanadihadiana an-tserasera misokatra hisafidianana ny anarana vaovao amin'ny fizarana.
fanadihadiana: Ny fanavaozana an'i Mandriva amin'ny maha distro matanjaka sy miasa azy ary mora ampiasain'ny mpampiasa dia toa najanona noho izany, ary tsy noho ny fihenan'ny kalitao fotsiny, fa satria ny olana dia nifanehatra ary mbola niatrika hatrany. Taona maro lasa izay dia nekena ho iray amin'ny 10 tsy voadinika amin'ny fizarana Linux tsara indrindra; androany dia toa mihetsiketsika ao anaty ranomasina miova onja. Hain'ny Mandriva ny fanavaozana raha ny momba ny fanohanan'ny fitaovana, ary ny ampahany betsaka amin'ny fampiakarana azy dia ny fananana distro voarindra tsara, miaraka amina rindrambaiko sy fitaovana maro karazana ary fahamafisana mifanohitra tanteraka amin'ny toe-bolany.
Ny fanolorana ny fampandrosoana ho an'ny fiarahamonina dia mety hanatsara ny toe-javatra. Na izany aza, nandritra ny vanim-potoana nisavorovoroany, mpampiasa maro no nifindra monina tany amin'ny fizarana hafa nitady fitohizan'ny fampandrosoana, ary ny fahazoana azy ireo dia tsy ho asa mora raha ny safidy tsara hafa misy ankehitriny. Amin'izao fotoana izao, amin'ity taona ity dia hikatsaka ny hamerina ny voninahitry ny kinova 2009 sy 2009.1, angamba ny teboka avo indrindra amin'ny tantaran'i Mandriva. Ny fanatontosana izany na tsia dia miankina amin'ny fomba fandaminana ny fiarahamonina miaraka amin'ny fototra vaovao ary raha azo ahitsy ny tsy fandriam-pahalemana nanodidina an'io fizarana mahatalanjona io.
2010: Tamin'ny volana Oktobra, nisy vondrona mpamorona taloha-Mandriva sy mpampiasa sasany nanambara ny fananganana ny fototra Mageia, miaraka amin'ny fanambarana ny fanafoanana ny Edge-IT. Ny vondrona vaovao dia nanambara ny famoronana ny distro mitovy anarana ary nilaza fa "tsy te hiankina amin'ny fiovan'ny toekarena na ny hetsika stratejika raha tsy misy fanazavana avy amin'ny orinasa." Voafaritra ny maodely mavesatra amin'ny asan'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana.
2011- Navoaka tamin'ny volana Jona 2011 ny Mageia 1, miaraka amina isa misintona tsy mahazatra ho an'ny distro vaovao. Manangana vondrom-piarahamonina matanjaka ianao ary mahazo valiny betsaka avy amin'ireo mpampiasa. Ny tsingerin'ny fampandrosoana 9 volana dia miorina miaraka amin'ny fanohanan'ny 18 volana isaky ny kinova
2012: kinova alpha sy beta maromaro amin'ny kinova faharoa no navotsotra. Aorian'ny famerenan'i Mandriva ny fifehezana ny vondrom-piarahamonina dia nomena ny fanampiany i Mageia ary honohono ny mety hisian'ny tetikasa fiaraha-miasa. Nolavin'ireo mpandrindra Mageia ilay fanasana ary andro vitsivitsy taty aoriana dia natao ny fandefasana farany ny Mageia 2, manome fitoniana lehibe kokoa ary fonosana maherin'ny 10.000 ao amin'ireo trano fitahirizana. Ny drafitra ho an'ny Mageia 3 dia voalaza.
fanadihadianaNa dia 3 taona monja aza ny tantara dia nahazo toerana teo amin'ity lisitra ity i Mageia. Ny tena antony noho ny savorovoro dia nateraka tamin'ny naha mpandimby azy "eo noho eo" an'i Mandriva tamin'ny fotoana nilaza fa tandindomin-doza ny distro noho ny olana maro samihafa. Nijanona tamin'io fifandonana io, ny Mageia Foundation dia nifantoka tamin'ny famolavolana ny rafiny manokana izay hisokatra ho an'ny fiarahamonina, izay hiafaran'i Mandriva ho velona.
Mageia dia fizarana tena tsara. Ny kinova faharoa dia nanitsy ny olana maro nananan'ny lahimatoa, ary koa nampitombo ny lisitry ny rindranasa ao amin'ireo fitoerany sy ny isan-karazany ny fitaovana enti-manohana; Na dia tsy izy irery aza ny tontolo misy sary, ny KDE dia mifanaraka tsara amin'i Mageia, manome traikefa nahafinaritra kokoa ho an'ny mpampiasa.
Ny zava-drehetra dia manondro fa hanohy hisarika mpampiasa vaovao i Mageia ary hifantoka amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fizarana azy, izay na dia tsy lavorary aza, dia nampiasa tsara ny fotoana ratsy an'i Mandriva mba hampitomboana ny isan'ny mpampiasa.
2007: Ny famoahana ny andiany 10.3 tamin'ny Oktobra dia nifantoka tamin'ny fanarenana ny fonosana fampidinana (manampy ny fanohanana ny 1-Click Install), ny fanohanana ara-dalàna ny MP3 an'i Fluendo ary ny fanatsarana amin'ny fotoanan'ny entana.
2008: Ny Version 11.0 dia manomboka manampy safidy misintona maromaro sy birao samihafa; fanatsarana dia atao amin'ny lafiny hafainganan'ny rafitra. OpenSUSE 11.1 dia azo alaina amin'ny faran'ny taona, ary aorian'izay dia hahemotra ny famoahana ary hisy fotoana iray hiditra izay fanavaozana ihany no havoaka.
2009: Tamin'ny volana Novambra, navoaka ihany ny kinova 11.2, izay manampy fanatsarana lehibe toy ny ext4 sy ny fanohanana PowerPC, ny KDE ho tontolo iainana sary lehibe, mamela ny GNOME ho safidy, ny mety hisintomana amin'ny tambajotra (rakitra 150 MB mamela ny fisintomana ny ambiny ny rakitra apetraka amin'ny alàlan'ny Internet)
2010: OpenSUSE 11.3 dia navotsotra tamin'ny volana jolay, kinova malaza be teo amin'ireo mpampiasa izany ary anisan'ny kinova avo lenta indrindra amin'ny alàlan'ny solosaina. Nihatsara ny fifanarahana Netbook, nanampy tontolo tontolo birao maivana (Meego ao amin'ny OpenSUSE sy ny Plasma Netbook Workspace an'ny KDE), fanohanana fanandramana ho an'ny btrfs sy JFS, fanohanana ireo fitaovana finday, fanampiana ireo fitaovana ho an'ny mpizara sy fampandrosoana, fanavaozana ireo tontolon'ny sary 2 (KDE, GNOME, XFCE, LXDE), miampy kinova fanabeazana vaovao.
2011: Famoahana ny kinova 11.4, miaraka amin'ny fanavaozana fonosana sy fanatsarana kely, ary ny kinova 12.1, izay tsy nahatratra ny fahombiazan'ny teo alohany. Ny fanatsarana ny tsimbadika farany dia nahitana ny fanoloana ny Open Office an'ny Libre Office, KDE Plasma amin'ny KDE, WebYaST ary OwnCloud ho an'ny fitantanana tambajotra sy poloney ny YaST GUI amin'ny KDE.
2012: Nahemotra ny famoahana ny kinova 12.2 ary miteraka tsy fahafaham-po amin'ny fiarahamonina. Na eo aza izany dia mitombo ny isan'ny fampidinana ny kinova 12.1, mitombo ny isan'ny fonosana ao amin'ny trano fitahirizana. Ny RC an'ny 12.2 dia misy ankehitriny
fanadihadiana: Amin'ny maha-mpampiasa OpenSUSE ahy dia samy nahita ny toetra tsara sy ny lesoka tamin'ity fizarana ity aho ary androany dia hitako fa manana rafitra feno sy sariaka hampiasaina aho. Na eo aza izany, ny fahatafintohinana kely mitranga dia famantarana iray fa toa nijanona ny fampandrosoana, na dia tsy marina tanteraka aza izany.
Mazava ho azy fa OpenSUSE dia nahavita toerana fanajana teo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux tamin'ny nanehoany fivoarana tsy misy kilema hita taratra amin'ny rafitra azo antoka sy matanjaka nefa tsy natao ambanin-javatra ny fampiasana na ny fandefasana loko amin'ny tontolo sary, ary izany no antony iray nahasarika mpampiasa be dia be. Amin'ny alàlan'ny fanolorana fomba hafa azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny endrika fandefasana azy, ny birao isan-karazany, ny sampana Factory ary ny Tumbleweed ary koa ny SUSE Studio, ny mpampiasa dia manana ny fomba rehetra hananganana ny fizarana araka izay tiany indrindra. Ity fahalalahana fampiasana ity, izay tsy hita amin'ny ankamaroan'ny distros, dia mandrisika ny fitomboan'ny mpampiasa azy isan'andro.
Raha fintinina, na dia tsy io aza no tena fizarana lehibe, ny OpenSUSE no lohalaharana hatrany ary ohatra iray hafa amin'ny fahombiazana sy tanjaka omen'ny tontolon'ny GNU / Linux antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ny 5 taona farany an'ny distros lehibe sasany
Jaume Torres Ortega dia hoy izy:
satria vaovao amin'ny linux aho dia efa nampiasa 3 volana teo ho eo ny kubuntu ary mieritreritra ny hiova amin'ny fizarana hafa aho, inona no torohevitra omenao ahy?
Valiny tamin'i Jaume Torres Ortega
Juan Pablo Jaramillo Pineda dia hoy izy:
Manaiky tanteraka. Ahoana no tsy fanaovan'i Debian GNU / Linux? Oo
Valiny tamin'i Juan Pablo Jaramillo Pineda
Josue Aquino dia hoy izy:
ary debian sy arch? 😐
Valiny tamin'i Josue Aquino
Alexein dia hoy izy:
Ny arch dia tsy marin-toerana, na dia maharary aza, dia mila manankina ny tenanao amin'ireo andriamanitra rehetra ianao ary miampita amin'ny rantsan-tànanao mba hiasa tsara ny zava-drehetra isaky ny fanavaozana, saingy tsara ho an'ireo izay manam-potoana hikarohana ny wiki sy forum mahafinaritra azy ireo.
Valiny tamin'i Alexein
Mageia dia voatanisa ho an'ny fiantraikan'ny fanambarana sy ny fanombohana azy, miaraka amin'ny fitomboana tsy mahazatra ho an'ny distro vetivety toy izany. Raha tsy navoaka akory ny distro nolazainao, ahoana no ahafahanao manantena fa hisy fiatraikany lehibe amin'ny tontolon'ny GNU / Linux? Ankasitrahana ny fomba fijerinao, misy tokoa ny dichotomy amin'izay tokony hampidirina na hanilika an'io na io distro, fa famakafakana manokana fotsiny io, ny fomba fijerinao manokana, tsy misy hafa. Mihobia!
Indio dia hoy izy:
Mpankafy endrika mageia ity lehilahy ity. Ahoana no ahafahako mamoaka lahatsoratra momba ny distro misy lanjany tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary mampiditra iray izay 1 fotsiny ... xD ary manamarina ny antsasany dia manomboka miantso ny amie izy nanomboka ny taona 2010, rehefa isaina ny fiantraikan'ny distro hatramin'ny nanafahana azy fa tsy tamin'ny fiterahana. Ary raha tsy izany, mangataka aho mba hampiditra ny distro ahy manokana, Indio Linux, izay efa 5 taona no nihetsi-jaza, saingy mbola tsy namoaka azy xDD (ilaina ve ny manasongadina ny mahatsikaiky?)
Mamaly an'i Indio
ajajajaj hitanao fa efa 5 taona ny amgeia…. pff toy ny maniulan xD..Mageia tsy misy lasa, manana ny ho avy izy, koa dokambarotra maimaimpoana ho an'io distro io
Raha tianao ny APT sy ny toy izany saingy tsy resy lahatra amin'ny interface graphique ianao dia Linux Mint na Debian.
Mamporisika anao koa izahay hitsidika ny faritra «Distros» anay: http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Septentrion Zoster dia hoy izy:
Te-haneho hevitra aho fa mpampiasa an'i Mandriva ary avy eo Mageia. Ny marina dia efa ho 9 volana aho no niara-niasa tanteraka tamin'i Mageia. Mampalahelo fa, tamin'ny fanavaozana azy ireo, dia niteraka olana lehibe tokoa izy ireo tamin'ny mpamily tambajotra, horonantsary ary feo mp3. Noho izany dia niharatsy zavatra nanomboka tsara izy ireo. Etsy ankilany, ny vondrom-piarahamonina Mageia Latina dia klioba feno olona miavonavona izay tsy manome fanampiana. Izay no antony tsy tokony nanonononan'izy ireo an'i Mandriva na Mageia teto. Distros izy ireo izay miteraka olana bebe kokoa noho ny tombontsoa. Ary raha tsy manamarina ny Internet momba ny olana ateraky ny fampiasana an'ity distro ity amin'ny tambajotra ianao. Ary ny vondron'olona irery ihany no mametra ny tenany amin'ny hoe "hahaha tsy dia hoe manary tambajotra aho na tsy mahafantatra peripheraly ary miteraka olana amin'ny audio na video"
Mamaly an'i Septentrion Zoster
Pollolinux dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'i Ramon aho, andao hiresaka momba an'i Debian, renin'ny distros maro ...
Mamaly amin'ny Pollolinux
Mazava sy fohy.
Ny fanamarihana dia fitakiana antoko faharoa fotsiny. 🙂
Tamin'ny 23/07/2012 13:28 PM, «Disqus» nanoratra:
Te-hanazava olana roa aho, amin'ny ankapobeny ny famakiana ireo hevitra sy hevitra, izay manana fisalasalana voarindra tsara:
1- Hiditra distros bebe kokoa ity lahatsoratra ity tany am-piandohana, saingy satria fotoana hanaterana asa sy zavatra hafa amin'ny facu, dia najanonay ireo fiara fitateram-bahoaka INDRAY THE MOMENT. Araka ny nolazain'i Pablo, amin'ny voalohany dia manazava ireo izay tsy eo izy ary azo inoana fa ny ampahany faharoa dia hosoratana amin'ireo distro tsy hita ireo, mangataka faharetana fotsiny isika 😛
2- Maninona no 5 taona lasa fotsiny fa tsy misy intsony? Satria nihevitra izahay tamin'ny voalohany fa ity vanim-potoana ity dia hitaratra ny toetoetran'ireto disro ireto sy ny fiantraikan'izy ireo teo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux. Azo natao tamin'ny taona lasa ny famotopotorana, na izany aza tsy dia nisy loatra ny fampahalalana ary nitarina be ilay lahatsoratra.
3- Tafiditra ao i Mandriva satria na eo aza ny toe-javatra misy azy ankehitriny dia talohan'ny nanatontosany izany fotoana izany. Mageia no "mpandimby azy", ary na dia tsy betsaka aza ny mpampiasa azy, ny lanjany dia noho ny zava-bita vao haingana sy ny fifandraisany tamin'i Mandriva.
4- Linux Mint dia distro transendra toa an'i Ubuntu. Ilay lahatsoratra dia TSY milaza mazava tsara fa ny MINT dia Nihoatra ny UBUNTU tany USOT QUOTA, saingy tamin'ny 2011 dia «manolo ny Ubuntu amin'ny laharan'ny fijerin'ny pejy manokana an'ny
Distrowatch, manamarina ny fitomboan'ny lazan'ny Mint. Ny lazan'ny distro dia tsy mitovy amin'ny isan'ny mpampiasa: ny distro dia mety ho malaza noho ireo voalaza ao amin'ny bilaogy, pejin-tranonkala, famakafakana, noho ny famoahan-kevitry ny mpampiasa ao amin'ny forum, amin'ny alàlan'ny tolo-kevitra ary fomba maro hafa an'arivony , tsy miresaka afa-tsy ny sarany fampiasana. Tsy mpampiasa ARCH aho, saingy fantatro fa malaza izy io satria izy io no iray amin'ireo disko be mpahalala ao amin'ny haino aman-jery Linux manam-pahaizana manokana, toa an'ity bilaogy ity ihany 🙂 fa tsy izany dia ho hafohezina, farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, nasongadiko fa tamin'ny forum maro dia hitako ny fanehoan-kevitra mahazatra sy miverimberina "manandrana ny Linux Mint aho satria mpampiasa Ubuntu ary ankehitriny tsy tiako izany noho ny fampidirana ny Unity", ary izany dia manamafy fa eo dia fironana handeha avy any Ubuntu mankany Mint, ary izany dia miteraka, amin'ny ampahany, ilay "tabataba" izay nataon'i Mint ankehitriny. Raha samy mandika ny hoe Mint na Ubuntu dia malaza kokoa na latsaka noho ny namany dia efa fandalinana manokana ny tsirairay avy.
5- Hampidirina ao amin'ity fanadihadihana ity i Debian, saingy tsy dia be loatra ny fanazavana hita, ka tapaka fa hakatona ny lahatsoratra amin'izay misy. Eny, io no distro "reny" amin'ny sasany amin'izy ireo voatanisa eto ary mendrika ny ho ao amin'ny tapany faharoa amin'ity lahatsoratra ity, aza manahy.
6- Nanomboka nampiasa Linux tamin'ny Ubuntu aho, avy eo nivadika Linux Mint ary ankoatran'ny Mint dia mampiasa Fedora sy OpenSUSE ihany koa aho. Nandritra ny fotoana fohy dia nanandrana an'i Mageia ihany koa aho. Fantatro tamin'ny zavatra niainako fa samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany ny tsirairay, ary ny hevitra ankapobeny dia ny tsy tokony ho filaharana, fa tsy misy WINNER, fa aleo diniho izay nataon'ny distro tsirairay tao anatin'izay taona izay ary jereo ny vokatr'izany teo amin'ny toe-javatra misy ankehitriny .
7- Mikasika ny Ubuntu, distro tsara izy io, na dia tsy ampiasaiko aza izany dia tsy laviko ny lazan'ny olona na ny fitaomana na ny lanjany. Ao amin'ny lahatsoratra dia azonao jerena tsara ny fomba isafidianan'ny fikambanana samihafa hampiasa na hampihatra azy io ary ny fomba fanamihafana azy amin'ny vokatra samihafa (Ubuntu TV, Ubuntu for Android, sns).
8- Izay voasoratra dia araka ny hevitro ary mety tsy hitovy hevitra ny tsirairay, samy manana ny fahitana sy ny heviny ny tsirairay
Noho ny fomba nanoratana ny lahatsoratra dia azo lazaina fa nihoaran'ny Ubuntu ny Ubuntu amin'ny resaka fampiasana sy ny lazany, saingy… Inona no ifotoran'izy ireo hilazana fa ny Linux Mint no be mpitia indrindra sa manana ny anjarany avo indrindra? Noho ny statistikan'ny Distrowatch? Izy io dia ny marina ary angamba diso aho, tsy hitako na aiza na aiza, tena matoky aho fa ny Linux Mint dia nihoatra ny Ubuntu tamin'ny quota ampiasainy, mijery fotsiny ny vaovao toa an'i Steam, vaovao avy amin'ireo mpanamboatra izay miloka amin'ny fanolorana an'i Ubuntu mialoha -fametrahana, vaovao momba ny Ubuntu TV, ankoatry ny hafa.
Tsara izany Linux Mint ary fantatr'izy ireo ny fomba hifindra hanintonana mpampiasa marobe izay tsy te hahalala na inona na inona momba ny fanovana ifotony nomen'ny tontolon'ny birao lehibe, tsy isalasalako izany (jereo fa na ny Mint's Firefox aza dia mitondra marika. mankany Distrowatch), saingy mieritreritra aho fa tsy ampy be ny afaka mifanandrify amin'ny Ubuntu farafaharatsiny amin'ny isan'ny mpampiasa sy ny lazany.
Marina indrindra. Tamin'ny Ubuntu dia tonga tamin'ny 11.04. Izay lazainao dia tao amin'ny Ubuntu Netbook Edition, tsy mitovy amin'ny Ubuntu (ny kinova lehibe).
Francisco Verdeja dia hoy izy:
Tena tao amin'ny 10.10 izy io ho toy ny kinova ho an'ny Netbooks, toa tsara lavitra noho ilay kinova nivoaka tao amin'ny Ubuntu 11.04, saingy tena tsy milamina izy io noho i Mutter, izay tamin'izany fotoana izany dia mpitantana varavarankely tena tsy milamina, mavesatra ary miadana
Valiny tamin'i Francisco Verdeja
Raha te-ho mpampiasa OpenSUSE aho dia mila milaza fa amin'ireo dinihina rehetra dia io no nahatonga anao ho xD fohy indrindra
Eny, ralehilahy, satria ny lohateny dia tsy miresaka ireo izay manana lanja bebe kokoa amin'izao fotoana marina izao, fa ireo izay nanana izany tao anatin'ny 5 taona lasa.
Hehe… ny andininy voalohany dia manazava ny antony.
Tsy hita izy mba hanasongadinana azy ary hita fa maro no tsy namaky azy. Miseho mavo io ankehitriny.
Marina ny anao! Efa nahitsiko ny lesoka.
Misaotra anao! Paul.
Jereo ny fehintsoratra voalohany amin'ny lahatsoratra. Tao dia nanjary mazava ny antony tsy maha-izy ireo azy ireo. Azo antoka fa ho avy amin'ny fizarana faharoa izy ireo. Tsy afaka atao miaraka ny manao lahatsoratra momba ny distros REHETRA.
Ao amin'ny lahatsoratra dia nohazavaina ny antony tsy ananan'i Arch, ilay Debian iray ihany.
Tena tsy tratra i Debian fa ny marina dia farafaharatsiny misy ireo rehetra tsy maintsy eo ary tena fantatra any ivelan'ny Linux izy ireo
Carbestos dia hoy izy:
Ny firaisankina dia tsy navoaka tamin'ny 10.04 fa tamin'ny 11.04
Mamaly an'i Carbestos
ary Arch? Manomboka izao dia esoriko avy eo amin'ny tsoratadidy.
Maninona no apetraka ny andohalambo raha rafitra mihodina izy io, ahoana no hamakafakana distro arakaraka ny fotoanany raha tsy mamoaka kinova sahaza azy mihitsy?
Heveriko fa tsy hita ao amin'ity lisitra ity i Debian, mihoatra ny zava-drehetra satria io no fototra sy faka (ary amin'ny% avo) an'ny distro hafa izay eto toa an'i Ubuntu na Mint.
Ary satria efa ela aho no tsy nandray anjara tamin'ny Linux, hatramin'ny 2009 tsy misy zavatra hafa intsony, tsy azoko hoe ahoana no ilazana ny Madriva (sy ny fork Mageia) satria tsy dia manana lanja firy izy ireo ao amin'ny Community, na dia fantatro aza izany efa nahazo an'io izy ireo tamin'io fotoana io, ankehitriny kosa tsy manana.
Na izany na tsy izany, lahatsoratra tena tsara ary asa famintinana tsara.
Vaovao tsara. Fa maninona no tsy eo i Arch? Sarotra ny manamboatra azy, saingy miorina mafy, mandeha izy io.
Stucco dia hoy izy:
Inona no nanjo an'i Arch? Ary ny daty talohan'ny 2007? redhat dia efa antitra tahaka an'i debian… ..
Mamaly an'i Estuaco
Misy Mageia ary tsy misy Arch, tonga lafatra ... / s
Miandry ny fampahalalana momba ny gentoo, sabayon, debian, LMDE aho.
Linux Mint 13 Xfce misy
Manana ny menio Gnome 2 ao amin'ny Xfce nefa tsy mametraka na inona na inona